Rastrabani.com | गठबन्धनका ३ गाँठा के हुन त ? - Rastrabani.com गठबन्धनका ३ गाँठा के हुन त ? - Rastrabani.com
गठबन्धनका ३ गाँठा के हुन त ?
काठमाडौ २२ पुस । राष्ट्रिय सभागृहबाट असोज १७ मा वाम गठबन्धन घोषणा गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेका थिए, चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौं । त्यो घोषणालाई मूर्तरूप दिन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ ले काम गर्ने भनिएको थियो ।
बैठक बस्नुअघि दुवै दलका अध्यक्षले छलफलका औपचारिक एजेन्डा तयार गर्ने भनिएको थियो । दुवै अध्यक्षबीच नै प्रारम्भिक खाकामा सहमति बनेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको अनौपचारिक छलफल नै लम्बिइरहेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्  ।
केही दिनयता त अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । ओली स्वास्थ्य गडबडीका कारण घरमै आराम गरिरहेका छन् भने दाहाल औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन् । साताअघि पाँंच दिन चितवन बसेर राजधानी फर्केका दाहाल बिहीबार पुन: गृहजिल्लातिरै गएका छन् ।
दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा पार्टीको नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र सिद्धान्त गरी तीनवटा विषयमा गाँठो परिरहेका छन् । त्यो गाँठो फुकाउने विकल्पमा समझदारी नबन्दा दुई दलबीचको एकताको ठोस आधार तयार हुन सकेको छैन । दुवै दलका अध्यक्ष र दोस्रो/तेस्रो तहका नेताबीच एकताको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ । तर दुवै दलमा एकतापछि आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने स्वार्थका कारण सहमतिको विन्दु तयार भएको छैन । गाँठो परेका तीन विषयमाथि दुवै दलबीच केही विकल्पहरू छलफलमा छन् ।
वाम गठबन्धन बनाउने बेला दुई पार्टीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति पनि थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा गठबन्धन घोषणा गर्दा सार्वजनिक गरिएका ६ बुँदामा त्यो कुरा उल्लेख छैन । त्यसअघि बसेका दुवै दलका बैठकमा भने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने बँुदा समेटिएको सहमतिपत्र पेस भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै गत साता चितवन पुगेका बेला औपचारिक रूपमै आलोपालो गर्ने विषयमा सहमति भएको खुलासा गरिसकेका छन् । उनले दुवै नेता कार्यकारी भूमिकामा रहने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘दुइटै पार्टीका नेतालाई समूचित भूमिका दिनेमा विमति छैन, पदीय जिम्मेवारी त्यहीअनुसार हुन्छ,’ दाहालले बिहीबार चितवनमा भनेका छन् । त्यसो त पार्टीको मुख्य नेतृत्व पनि आलोपालो प्रणालीबाट चलाउन सकिने विकल्प छलफलमा आएको छ । त्यो विधिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा र दाहाल प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा ओली त्यो जिम्मेवारीमा रहने भन्ने हो । माओवादीले नेतृत्व दाबी गरिरहँदा एमालेभित्र भने प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व पनि ओलीले नै गर्नुपर्ने दबाब उत्तिकै छ । यद्यपि, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पार्टीको नेतृत्व सामूहिक शैलीमा जान सकिने धारणा राख्छन् । ‘पारदर्शी रूपमा सामूहिक ढंगले चल्ने सिद्धान्तमा सहमति भए को व्यक्तिले के पद लिने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन,’ नेता नेपालले भने, ‘पदका कुरा मिलाएर जान सकिन्छ ।’
दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा गाँठो परेको अर्को विषय हो– संगठनको स्वरूप र नेताहरूको व्यवस्थापन । एमालेमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल तथा माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायतको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि एकतामा प्रक्रियामा उत्तिकै जोडिएको छ । उनीहरूलाई कस्तो संरचनाभित्र कुन पद र भूमिका दिएर सन्तुष्ट राख्ने ? यो विषयको गाँठो पनि फुकेको छैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच फुट र जुटको मुख्य कारणमा सिद्धान्त जोडिने गरेको छ । एमाले र माओवादीबीचको एकतामा पनि यो विषय पेचिलो बनेर आएको छ । हाल एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)×’ लाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको छ । माओवादीले ‘माओवाद’ सिद्धान्त मान्ने गर्छ । अब एकतापछि कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्ने विषयले दुवै दलमा तरंग ल्याइसकेको छ ।